Hiala tsy ho ela ve ny fandefasana Drone? | Martech Zone
Hiala tsy ho ela ve ny fandefasana Drone?
Sabotsy, Janoary 26, 2019 Alatsinainy Janoary 28, 2019 Douglas Karr
Ny fitsapana ireo haitao farany dia ampahany mahafinaritra amin'ny asako. Mividy teknolojia matetika aho mba hanomezana azy fitsapana fotsiny ary hiantohana fa manaraka hatrany aho. Volana maro lasa izay, nividy a DJI Mavic Air, ary nanandrana azy niaraka tamin'ny mpanjifa vitsivitsy.
Tsy gamer aho, ka harafesina ao ambadiky ny mpanera. Taorian'ny fitsapana azy tamin'ny sidina vitsivitsy dia gaga aho tamin'ny fomba nanidinan'ireo fitaovana ireo ny tenany. Miala ny drôna ary miverina irery, hanaraka ny fetran'ny valindrihana, hanidina ireo lamina voalamina, ary hanaraka fambara tanana mihitsy aza.
Miaraka amin'ny drôna efa mandroso be, fandefasana drone ho an'ny varotra sy ecommerce ho avy tsy ho ela? Tsy azoko antoka izany. Na dia minitra vitsy monja aza ny fandefasana any amin'ny magazay sy trano fitehirizana ary mety hampihena be ny vidin'ny fandefasana azy, dia misy olana vitsivitsy ihany koa handresena drôna, anisan'izany:
Drone Safe - Drôna dia mety misy tsy fahombiazana ara-mekanika na teknika hafa amin'ny sidina. Miaraka amina an-tapitrisany amin'izy ireo manidina ao amin'ny tanàna iray, tsy maintsy manana fahasimbana amin'ny fananana isika, ary angamba, ratra manokana.
Olana amin'ny tsiambaratelo - tsy isalasalana fa ny drôna rehetra dia handraikitra ny fihetsiny rehetra. Vonona ve isika amin'ny asa rehetra ataontsika isan'andro izay voarakitra an-tsoratra? Tsy azoko antoka fa vonona izahay amin'izany.
Famerana ny sidina - Mipetraka eo akaikin'ny seranam-piaramanidina monisipaly aho, ka misy valindrihana amin'ny sidina rehetra. Drôna manidina ambany dia hitabataba be. Ny drôna manidina avo dia mety mila entina manodidina ny mari-toerana, tranobe ary faritra tsy misy sidina. Tsy maintsy manamboatra lalambe virtoaly isika… izay mety hisintona ny fahombiazan'ny fandefasana teboka-to-point ary hampihena ny fahombiazan'ny drôna amin'ny kilometatra farany.
Tetik'asa McKinsey izay hataon'ny fiara mizaka tena, anisan'izany ny drôna mandefa 80% ny entana rehetra amin'ny manaraka. Ary miaraka amin'ny 35% ny mpanjifa milaza fa manohana ny foto-kevitra izy ireo, mazava fa miha malaza ny fampiasana drôna.
Tsy misy isalasalana fa ho avy ny fanaterana drôna, saingy be ny eritreritra sy ny drafitra mila miatrika ireo fanamby ireo. Ity infographic avy amin'ny 2Foitra, mpiara-miasa amin'ny fanatanterahana avy any ivelany, mandinika ny tombony sy ny fanamby mifandraika amin'ny drone entana ary manasongadina ny fomba mety hanakorontanan'ity haitao ity ny fandefasana kilometatra farany lasa.
Tags: drônafandefasana droneuavfiaramanidina fiaramanidina tsy misy olona
Douglas Karr Saturday, January 26, 2019 Monday, January 28, 2019
Teknolojia maoderina 10 manatsara ny marketing nomerika
Fitaovana marketing 9 hanampiana anao hamorona votoaty bilaogy tsara kokoa